VoIP Conferencing system lets you have | Premier Ventures
VoIP Conferencing system lets you have the convenience of video calls using IP-Phones. We offersarange of high quality communication hardware. You can mix and match the IP-Phones with our recommended IP-PBX and in-house VoIP system that suits your preference. We only provide the list of recommended hardware to get the best results for our customers.
We have everything that any business needs to createapowerful yet affordable video conferencing solution that increases productivity and saves money on business travel. If you are looking for room-based hardware solutions, our various series of Video Conferencing devices empowers any business witharobust and affordable collaboration focused environment that can link together multiple offices and rooms.
If you are looking for an online video meeting solution, or if you needaplatform to link your devices together, look no further than our IP VideoTalk video, audio and web conferencing platform.
VoIP Conferencing စနစ် ဆိုသည်မှာ IP ဖုန်းများကို အသုံးပြုပြီး ရုပ်/သံ အစည်းအဝေးများ ကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဆက်သွယ်ရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့၏ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော IP-PBX နှင့် အိမ်သုံး ရုံးသုံး VoIP စနစ်များကို IP ဖုန်းများဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့၏ ဖောက်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော ရလာဒ် ကောင်းများ ရရှိစေရန် အလို့ငှာ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံချက် အပြည့်အဝ ရရှိထားသော (အရည်အသွေး ပြည့်မှီ / ပြည့်ဝသော) စက်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့၏မည်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်မဆို ငွေကုန်သက်သာစေပြီး ထုတ်ကုန်စွမ်းအား တိုးတက်စေရန် အတွက်အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော ရုပ်သံ အစည်အဝေး ဝန်ဆောင်မှုများကို Premier Ventures Co, Ltd မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
မိတ်ဆွေသည် ရုံးအတွင်း စက်ပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုလိုပါက မိတ်ဆွေတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် ရုံး တစ်ရုံး နှင့် တစ်ရုံး၊ ရုံးခန်း တစ်ခန်း နှင့် တစ်ခန်း အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် အကြမ်းခံပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော၊ ရွေးချယ်စရာ များပြား စုံလင်လှသော “ရုပ်သံအစည်းအဝေး” စက်ပစ္စည်းများကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ရုပ်သံ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်လိုပါက (သို့တည်းမဟုတ်) မိတ်ဆွေ၏ IT ပစ္စည်းများအားတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် “Platform” တစ်ခု လိုအပ်နေပါသလား။ Premier Ventures ရဲ့ အင်တာနက် ဖြင့် အသုံးပြုရသော ရုပ်မြင်သံကြားအစည်းအဝေး Platform က မိတ်ဆွေတို့၏ အခက်အခဲများအား ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့၏ မည်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်မဆို ငွေကုန်သက်သာစေပြီး ထုတ်ကုန်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန် အတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော ရုပ်သံ အစည်အဝေး ဝန်ဆောင်မှုများကို Premier Ventures Co, Ltd မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
© Premier Ventures